admintriatra, auteur sur - Page 2 sur 1851
05/01/2019 admintriatra 0
Nandritra ny fifampiarahabana noho ny taona vaovao teny amin’ ny primatiora, dia nahagaga ny fahasahian’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta Ntsay Christian nilaza fa “maro ireo olana nosedrain’ny governemanta, raha tsy hilaza afa-tsy ny nifehezana ny fandriam-pahalemana sy …Tohiny
Antananarivo Renivohitra : Miverina ny delestazy
Samy nahatsapa ny teto Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina fa tapaka matetika , indrindra fa rehefa amin’ny tolakandro ny herinaratra tato ho ato. Misy fotoana 5 minitra, mety 15 minitra izany fa amin’izao fotoana izao, …Tohiny
Fanalana fako eto an-drenivohitra : Kamio 25 no ahetsika mandritra ny 10 andro
Tsy dia ahitana fako mivangongo eraka ny arabe intsony eto an-drenivohitra tato anatin’ny herinandro vitsy izay. Mitohy ny fanesorana fako manerana ny tanàna ataon’ny orinasa Samva ho fanadiovana ny tanàna. Tao anatin’ny herinandro vitsivitsy izay, …Tohiny
Andavamamba : Norobain’ny jiolahy ny farmasia “Tsara”
Nisehoana fanafihana mitam-piadiana andro mazava indray teny amin’ny toeram-pivarotam-panafody iray eny Andavamamba Anatihazo, omaly tokony ho tamin’ny 3 ora tolakandro. Jiolahy miisa dimy tsy nisaron-tava ka ny iray nitondra “pistolet automatique” no nanafika ny farmasia …Tohiny
« 1 2 3 4 … 1 851 »
Tsy hiadian-kevitra intsony fa mpanao politika ny mpitondra Fiangonana eto amintsika, indrindra ny FFKM ary mikatsaka fanjakana tahaka ireo antoko politika rehetra ihany. Niteraka fizarazarana teo amin’ny mpino izany fidiran’ny politika teo anivon’ny FFKM izany, ...Tohiny
Sendikan’ny mpitsara : Mitovy hevitra amin’ny Filoham-pirenena